Samsung Galaxy S8 dia amidy anio ao amin'ny tranonkala ofisialy | Vaovao momba ny gadget
Samsung Galaxy S8 dia amidy androany ao amin'ny tranonkala ofisialy
Ny Samsung Galaxy S8 sy Galaxy S8 + vaovao dia azo ampiasaina hamandrihana amin'ny tranokala sasany na Amazon nandritra ny fotoana fohy ary ankehitriny dia misy mivantana avy amin'ny tranokala ofisialin'ny orinasa izy ireo, eny, ny fizotran'ny fividianana dia manondro fa Tsy hahazo ilay fitaovana isika raha tsy amin'ny 28 aprily ho avy izao. Raha ny tokony ho izy dia fivarotana maro, ao anatin'izany ny Amazon, no nandefa azy io ho tahiry taloha kelin'izay ary ireo mpampiasa voalohany nanao izany famandrihana izany dia manakaiky ny fahazoana ny Samsung Galaxy S8 vaovao anio, fa ho an'ireo izay te hividy azy mivantana amin'ny tranokalan'ny mpanamboatra azy io misy koa.
Nahagaga tokoa ny famandrihana ilay fitaovana tany Korea Atsimo, ka naharesy ny vinavinan'ireo mpamantatra toetrandro rehetra roa herinandro lasa izay ary ankehitriny ny orinasa dia antenaina hahatratra tarehimarika tsara any amin'ireo firenena sisa nanombohany ny varotra. Amin'io lafiny io dia afaka mampiasa mivantana ny anao izahay any Espana tranokala ofisialy hanao ny fividianana ny Galaxy S8 na S8 +, miaraka amin'ny safidy ankoatry ny famatsiam-bola avelany hiala amin'ny tranokala izahay. Ireto misy sasany amin'ireo famaritana ny Samsung Galaxy S8 vaovao:
6.2 ″ + efijery Quad HD
Fakan-tsary indroa 12 MP OIS + 8 MP AF
Fahafahana mitahiry 64 GB sy 4 GB RAM + micro SD
Rano sy vovoka mahatohitra
Rafitra fanekena Iris
Tsy isalasalana fa miatrika ny iray amin'ireo fitaovana Samsung tsara indrindra isika novolavolaina mandraka ankehitriny, famolavolana efijery tsara, fitaovana matanjaka be ary fanatsarana tsara vitsivitsy noho ny maodely teo aloha. Fa marina ihany koa fa manana teboka ratsy toa ny toerana misy ny sensor fantsom-panafody, ny tsy fahombiazan'ny rafitry ny fanekena tarehy ary ny vaovao farany momba ny efijery mena izay niseho vao tsy ela akory teo amin'ny tambajotra. Raha fintinina dia tsy terminal tonga lafatra izy io (tsy mino izahay fa misy izany) fa fitaovana tena tsara ho an'ireo mpampiasa be fangatahana indrindra izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Samsung Galaxy S8 dia amidy androany ao amin'ny tranonkala ofisialy
Bridgestone handefa ny kodiarana bisikileta tsy misy rivotra amin'ny taona 2019
Ireo mpitsidika tsara indrindra ho an'ny Mac